I-Samsung Galaxy S10: amaxabiso, amanqaku kunye nokufumaneka | Iindaba zeGajethi
I-Galaxy S10 yindlalifa yendalo kwi-Galaxy S9. Kulo nyaka, ngokungafaniyo nohlelo lwangaphambili, umahluko ophambili kunye nemodeli yokuDibanisa ayifumaneki kwicandelo elingasemva lokufota, kodwa ngaphakathi, nangona sijonga ngokusondeleyo, umahluko bambalwa ngenene.
I-Galaxy S10 ngumzalwana ophakathi, ohambelana neGPS S10e kunye neGPS S10 +. Ixabiso layo liqala kwi-909 euro, Ixabiso elifanayo njengeGPS S9 xa yayisungulwa kunyaka ophelileyo. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngeGPS S10, ndiyakumema ukuba uqhubeke nokufunda.
1 Isikrini se-intshi ezingama-6,1
2 Iikhamera ezi-3 zokubamba nawuphi na umzuzu
3 Ukhuseleko olungaphantsi kwescreen
4 3.400 mAh ibhetri
5 IQualcomm 855 / Exynos 9820
6 Ixabiso leGPS S10 kunye nokufumaneka kwayo
Isikrini se-intshi ezingama-6,1
Njengohlobo lwangaphambili, i-Samsung ikhethe ukubonelela ngesayizi efanayo yesikrini njenge-S9, i-intshi ye-6,1, kodwa ngeli xesha, ukunciphisa, ngokubhekisele kubuncinci, omabini amanqwanqwa aphezulu nawasezantsi, ukudibanisa kwicandelo eliphezulu lasekunene ikhamera yangaphambili luhlobo lwesiqithi okanye ukugqobhoza.
Isikrini kunye Itekhnoloji ye-OLED, ayisiniki kuphela ukusetyenziswa kwebhetri okuncitshisiweyo, kodwa ikwasinika imibala eqaqambe ngakumbi kunye neyona yokwenyani kunaleyo sinokuthi siyiboniswe ziipaneli zemveli zeLCD. Isisombululo sescreen ngu-2k, isisombululo esinokuthi silungelelanise ngokuzenzekelayo ngokomxholo esiza kuwubonisa, ngesisombululo esipheleleyo se-HD sisetyenziswa ngokungagqibekanga.
Iikhamera ezi-3 zokubamba nawuphi na umzuzu
Zombini i-Galaxy S10 kunye neGPS S10 + zisinika iikhamera ezintathu ngasemva, iikhamera esinakho ngazo bamba nawuphi na umzuzu okanye imeko apho sizifumana sibulela khona kwi-angle ebanzi ebandakanyayo kunye nobukrelekrele bokuzenzela.
IGalaxy S10 isinika ilensi engile ebanzi, i-engile ebanzi engaphezulu kunye neelensi yefowuni. Enkosi kwiilensi zemfonomfono, sinokwenza i-2x zoom zoom ngaphandle kokuba sibe nomgangatho ekubanjweni. Ukongeza, enkosi kwisoftware yokuqhubekeka, sinokubona bukhoma ukuba isiphumo sokuthimba esinaso engqondweni siyakulunga nini xa siza kwenza iseshini yomzobo kunye nabahlobo okanye usapho lwethu.
Iikhamera zibekwe ngokuthe nkqo ngasemva, ukuze zenze ubungakanani bebhetri enkulu njengoko sinokubona ngeGlass Qaphela 9. Ikhamera engaphambili isinika Isisombululo se-10 mpx ikhatshwa linani elikhulu lokucoca ulwelo ukuze uzenzele iiselfies zakho ngaphambi kokuba uzithathe.
Ukhuseleko olungaphantsi kwescreen
Njengoko sibona kwimizobo eyahlukeneyo esiyenzileyo ngexesha lokwenziwa ngokusemthethweni koluhlu lwe-S10, le modeli ibandakanya inzwa yeminwe phantsi kwesikrini, isivamvo somnwe wesandla se-ultrasonic esisebenza kuyo nayiphi na imeko, into engenzeki ngeenzwa zeminwe zeminwe.
Ikwabonelela ngenkqubo ye- ukuqaphela ubuso esivumela ukuba sisivule isixhobo ngobuso bethu, nangona ingakhuselekanga kwaye ichanekile njenge-ID yobuso buka-Apple.
Nangona itekhnoloji iqhubele phambili kakhulu kule minyaka idlulileyo, Ibhetri ihlala ingoyena ndoqo wezixhobo ze-Achilles. Ngenxa yokuba iibhetri azikwazanga ukuvela njengoko kufanelekile, abavelisi bakhethe ukwandisa ukusetyenziswa kwezixhobo ngokusebenzisa iprosesa kunye nenkqubo yokusebenza.
Ndiyabulela koku kulungiswa, ibhetri ye-3.400 mAh yeGPS S10 ivumela ukuba sihlale usuku lonke ngaphandle kwengxaki. Ibhetri ye-Galaxy S10 iyahambelana nokutshaja okukhawulezileyo kunye nokungasebenzisi cingo, kodwa ikwasinika into ebalulekileyo: ukubuyisa umva kwakhona.
Ukuhlawulwa umva okubonelelwa yiGPS S10 ivumela ukuba sibize ngaphandle kwentambo nasiphi na esinye isixhobo esihambelana nomgaqo weQi. Lo msebenzi ulungele xa sishiye indlu ngaphandle kwebhetri kwii-headphone zethu ezingenazingcingo, ezinje nge Galaxy Buds, okanye silibele ukulayisha IGalaxy Active.
Isisombululo esisiso xa iqabane lethu likho ulibele ukutshaja i-smartphone yakho, yomenzi oko kukuthi, kwaye ufuna intlawulo ethile ukuze akwazi ukunxibelelana / a. Kufuneka siqwalasele amandla okuhlawulisa ezi zixhobo zikhutshwe kwisiphelo ngokwaso, ke kuyacetyiswa kuphela ukuba sikwenze oko kwiimeko ezithile.
IQualcomm 855 / Exynos 9820
Ngaphakathi kwi-Galaxy S10, sifumanisa, kuxhomekeke kwilizwe apho iprosesa yeQualcomm Snapdragon 855 okanye i-Samsung's Exynos 9820 iza kuthengiswa. Le nguqulo iyafumaneka kwiinguqulelo ezimbini: I-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina kunye nenye ene-8 GB ye-RAM kunye ne-512 GB yokugcina.
Ixabiso leGPS S10 kunye nokufumaneka kwayo
Njengomanduleli wayo, i-Galaxy S9, iyafumaneka ngexabiso elifanayo kunyaka ophelileyo kwimodeli yayo yesiseko, i-909 euros. Eli xabiso li-euro ezingama-150 ezibiza kakhulu kuneGPS S10e, olona hlobo lubiza kancinane kuluhlu lweGlass S. I-Samsung Galaxy S10 Iyafumaneka ngoku ukugcina kwiwebhusayithi esemthethweni ye-Samsung ye-909 euro, kwinguqulo yayo ene-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-Samsung Galaxy S10: amaxabiso, amanqaku kunye nokufumaneka